Gadaan seerota 370 oliin uumaa fi uumama bulcha – Oromedia
Home » Uncategorized » Gadaan seerota 370 oliin uumaa fi uumama bulcha
Soraa Halakee (VOA Afaan Oromoo)
(Oromedia, 8 Bitootessa 2017) Gadaan Oromoo seeraa fi heera mataa ufii, alaabaa ufii ka akka Booranaatti Baqqalaa Faajjii heeraa fi heera mataa ufii qabdi.Sirnii Oromoo kana tanumaaf UNESCOn qarooma addunyaa irraa barachuu malte jettee mirkansiteef.
Abbaan Gadaa Booranaa 71essoo,Kuraa Jaarsoo Kamisa dabre baallii fuudhe; qophii gammachuu torbaan tokkoo tolchaa bahaniif fixatee amma ya hujiitti dabre.
Wayaan jaarroleen mataa qabdu tun–Ruufa
Laftii oolaa(bokkaa gannaa fi hagayyaatti nama irraa oolee) horiin nama irraa dhumachuutti jira,gama tokkoon laftii waraana, abbaa gadaa waan hedduutti eegata.
Akka jecha jaarsa Argaa-Dhageettii,Doktor Borbor Bulee jedhutti warrii dhufe gammachuu guddootti fuula irraa mullata–wal gargaaree aadaa waliin jabeessee nagaa waliin eegachuuf walii gale.
Boorannii Gadaa keessaa seera gugurdaa 370 qaba.
“Bara bisaan lafa hin jirre,waan cufa caala bisaan diqqo jiraa fardaa kennan. Nama farda dabse—bisaan dhowwate,waan fardaa hin mallee tolche—gatii ‘qakee’, loon 30 adaban.”
“Isiin sanyii namaati.Daaraa dabarsti—nama horti.Nama cufa isiitti dura jira. Qaalluu yoo isiin hin fuudhin laduu [itti gaafatam] hin fuudhu.Warrii nadheen keessaa doote ‘warra ibiddii dhaame’ jedhan.Abbaan gadaa yoo baallii kennu niitii malee hin kennu. Nadheen nama nama horu. Dubbii isiin himatte manuma isiitti qoraniif malee gaaddisa alaatti hin geessan.Abbaa warraa du’eef ibiddi hin dhaamu,yoo niitii doote ammoo ibiddatti dhaame jedhan. Waan cufa dura jirti.Namii daaraa dabrsu(sanyii horu) isii,” jedha aabba Borbor.
Dubartii Booranaa ta fuudhan Saldaa harkatti naqattee fi cibra mataatiin beekan.Ta isiin mormaa qabdu ammoo –imuu.
Korii Gumii Gaayoo kora seera bade qajeelchu,ka hammaate dhiisisu, haaraa itti dabalaa mari’atu.Kori sun torbaan lama fa taa’a. Seerii 370nu irra dedeebihanii wal agarsiisanii qoratan.
Previous: Abbaan Gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo baallii fuudhe
Next: Galmi Abbaa Gadaa Odaa Bultum Ijaarame